Azonao atao ny mameno ny zava-drehetra ato amin'ity eBook ity eo ambanin'ny € / $ / £ 100 tsarovy fa ny hany azonao atao dia ny hamerenany amin'ny laoniny ny vola - Ny fotoana hampiasanao ny fampiasam-bola.
Teny iray fampitandremana! Ny fanaovana ny tenanao dia mety ho toy ny safidy mora kokoa saingy tsy maintsy tadidinao foana fa ny fotoananao dia misy ihany koa, ny ora rehetra iainanao satria ianao ny vola ho an'ny hofan-trano, ny fitaovam-pihariana ary ny zavatra ilain'ny olombelona toy ny fihinanana!
Ilaina ny manombatombana ny vidin'ny sarany amin'ny ora isaky ny fotoananao mba hahitana anao fotsiny, dia diniho ny vidin'ny fampiasana manam-pahaizana mety hamita ny asa amin'ny ampahany amin'ny fotoana mety hakana anao.
Izany no safidy ho anao, ary azo antoka fa olona tiako ny hahatakatra ny dingana tsirairay, saingy tokony handanjalanja ny safidinao ara-bola ianao rehefa manapa-kevitra ny hanao ny asanao manokana, hiasa amin'ny manam-pahaizana iray na hanatontosa tanteraka ny asa ary handany ny fotoanao zavatra izay tianao kokoa ary aiza no azonao ampidirina.
Afaka mamaky ity boky ity mandritra ny adiny iray ianao ary mamita ny dingana rehetra atao ao anatin'ny latsaky ny iray andro raha mifantoka amin'ny famitana ny dingana rehetra ianao. Na dia tokony tadidinao aza fa ny fananganana sy fitantanana tranonkala iray, miaraka amin'ny media sosialy, dia dingana mbola tsy mifarana.
Ity eBook ity dia manazava ny fomba hananganana haingana ny fototry ny orinasam-pandraharahana maharitra.
Tena mino aho fa raha manao fihetsika tsotra sy haingana ianao dia hahita vokatra tsara ao anatin'ny andro na herinandro, fa tsy manolotra ny vola miditra aminao aho mandra-pahitanao ny orinasanao an-tserasera izay mamokatra hatrany ny vola Mila mipetraka mandritra ny volana maromaro ianao.
Tokony hanana fidiram-bola lehibe hafa ianao amin'ny voalohany.
Raha tsy maintsy mametraka fanapahan-kevitra momba ny fandraharahana an-tserasera ianao mifototra amin'ny filàna maimaim-poana dia hahita fa tsy misy fanapahan-kevitra ny fanapahan-kevitrao, noho izany dia mety ho fotoana fohy ihany ny fidiram-bola ary ianao dia mamerina indray ny fidiram-bola vaovao amin'ny fotoana rehetra - marina izany toy ny miasa amin'ny olon-kafa!
Ny fakana takelaka dia azo ekena amin'ny hoe 'famahana haingana' ary angamba fomba iray hanangonana ny vola sy fitaovana ilainao mba hananganana ny orinasa, nefa tadidio fa mila manangana orinasa tena maharitra ianao mandritra ny fotoana maharitra.
Ny iray amin'ireo tombontsoa lehibe amin'ny fananganana orinasa an-tserasera dia ny hametrahanao ny ankamaroan'ny asa amin'ny voalohany, raha mandeha araka ny tokony ho izy ny asa atao fotsiny mba hanohanana ny fidiram-bola, fa tsy manamboatra ny rafitra amin'ny fotoana rehetra .
Tena mety ve ny 'ME' hamorona orinasa an-tserasera?
YES !!!! Ny olona avy amin'ny sokajin-taona rehetra, ny fiaviana, ny toe-javatra, ny zom-pirenena sy ny fahaiza-manao dia mamorona vola miditra madinika, midina sy midadasika amin'ny aterineto, raha misy olon-kafa afaka manao izany dia azonao atao izany!
Ataovy zavatra isan-andro na dia kely dia kely aza, ny firoboroboana tsy tapaka dia ny fanalahidy, aza kivy. Manao asa, manao fahadisoana, mianatra avy amin'izy ireo ary manao fanitsiana ilaina - Antsoina hoe 'READY - FIRE - AIM'.